တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် APEC စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်မည် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဂျာဆင်ဒါ အာဒန်၏ ဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် ၂၈ ကြိမ်မြောက် အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (APEC) စီးပွားရေး ခေါင်းဆောင်မှုများ၏ အစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ တွင် ပေကျင်းမြို့မှ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကာ အရေးပါသောမိန့်ခွန်း တစ်ရပ် ပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ရှီသည် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် APEC CEO ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ကြိုတင်အသံသွင်းထားသော ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကာ မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟွာက ဆိုသည်။ (Xinhua)
Xi to attend APEC Economic Leaders’ Meeting
BEIJING, Nov. 10 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping will attend the 28th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders’ Meeting in Beijing via video link on Friday and deliver an important speech, at the invitation of New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying said on Wednesday.
Xi will on Thursday attend the APEC CEO Summit viaaprerecorded video and deliverakeynote speech, according to Hua. Enditem
Photo : Chinese President Xi Jinping addresses the Informal Economic Leaders’ Retreat of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) via video link in Beijing, capital of China, July 16, 2021. (Xinhua/Li Xueren)